Ukuzalwa komntwana - injabulo umndeni ngamunye. Ngeshwa, yezizathu ezihlukahlukene, ezinye ngemva kokuzalwa komntwana wokuqala kudingeke silinde iminyaka. Ngezinye izikhathi awukwazi ukwenza ngaphandle kosizo ochwepheshe. Kuyinto imikhaya nezinkinga ukungazali futhi uyazifeza umsebenzi iqembu izinkampani "Umama Nengane". Izibuyekezo mayelana imitholampilo ungakwazi kuphela ukuzwa omuhle. Nge iminyaka nakho ochwepheshe imibhangqwana eminingi manje engayitholi injabulo emshadweni.
"Umama Nengane": imininingwane ejwayelekile ngenkampani
Iqembu nezikhungo zezokwelapha ukusebenza muva. Kuphela 2006 laqala ukusebenza emtholampilo kuqala "Umama Nengane". Izibuyekezo abonisa ukuthi cishe ngokushesha inani leziguli laliqala ukwanda ngokushesha. Ngemva isikhungo sokwelapha wabonisa imiphumela emihle ngempela. Ngenxa imishini eliphezulu nochwepheshe abanolwazi cishe zonke iziguli wakwazi kulungiswe inkinga yokungabi nenzalo. Futhi e kokukhulelwa kwesibeletho ukuvumele abesifazane abakhulelwe akazange ukukwenza ngendlela engokwemvelo.
Iminyaka engu-10, inani imitholampilo, "Umama Nengane" kakhulu anda. Namuhla, kuyinto 4 zobuchwepheshe esibhedlela yezokwelapha, imitholampilo 24 esibhedlela ngosuku, ezingaphezu kuka-6000 izisebenzi ezinekhono. Institutions asezindaweni eziningana emadolobheni amakhulu aseRussia. Abesifazane abaningi baba nethuba injabulo umama pathologies eziyinkimbinkimbi izifo zabesifazane. Imitholampilo ngamasevisi zabo njengoba Andrology abaqeqeshiwe futhi Urology, omsebenzi wakhe kuhloswe nokuqedwa ukungazali besilisa. Ingabe umholi ensimini yayo namuhla, maphakathi "Umama Nengane". Izibuyekezo abonisa ukuthi 98% eziguli uthole umphumela oyifunayo.
Imitholampilo bazilungiselela hhayi kuphela ekwelapheni ukungabi nenzalo. Igcina impilo yezingane futhi okubaluleke kakhulu. It has zonke imishini ezidingekile yokusiza umuntu ukuba aphefumule ka preterm izingane Centre "Umama Nengane". Izibuyekezo ukukhombisa ukuthi ezimweni eziningi, izingane azalelwa kwesikhathi, ngokushesha ikhula ngesisindo esifanele futhi ngenyanga kungenziwa akhishwe ekhaya.
Umtholampilo wokuqala Petersburg wavulwa. Ekuqaleni, lonke uhla lwezinsiza emkhakheni wokubelethisa nezifo zabesifazane yethulwa lapha. Kwakukhona bafaka ubuchwepheshe bamuva zokuzala esikhungweni "Umama Nengane" (Petersburg). Izibuyekezo abonisa ukuthi kakade 10 edlule, inani lezingane azalelwa ngokusebenzisa insemination yokufakelwa, anda izikhathi eziningana. Esikhathini enyakatho dolobha isikhungo sokwelapha sise Ephakathi Avenue, Ukwakha 88.
Baningi okubuyayo ingazwiwa isikhungo sakho sezokwelapha wedolobha, nesebenzela eMoscow ngesikhathi Sevastopol Avenue, Ukwakha 24, Ukwakha 1. Enhloko-dolobha, ihhovisi futhi kwavulwa ngo-2006. Namuhla, isakhiwo omkhulu yezinkinga ezihambisana nezifo zabesifazane, ukuzixazulula emtholampilo "Umama Nengane" (Sevastopol). Izibuyekezo abonisa ukuthi lapha aphathe abesifazane abashonelwa zonke lokuba abakhulelwe. Nokho, indlela ngamunye futhi Ukukhetha efanele kwezidakamizwa ukwenza into yabo.
Phendula kahle iziguli kanye esibhedlela emtholampilo "Umama Nengane" ku Ufa. Lapha ihlelwe esibhedlela. Anganqamuki ngaphansi kokuqondisa ochwepheshe kungaba owesifazane pathologies sina izifo zabesifazane. Ukusebenzisa imishini yamuva zokuxilonga emtholampilo "Umama Nengane (Ufa). Izibuyekezo abonisa ukuthi uphethwe ngesikhathi esifanele lembula yezifo Izitho zokuzala ngendlela efanele usaqala.
Ryazan futhi ivule isikhungo sezokwelapha multidisciplinary. Namuhla, imisebenzi eyenziwa ezindaweni ezifana ekwelapheni ukungabi nenzalo, ukusebenza kwayo nezifo zabesifazane op, ukuchitheka kwesisu. It unikeza IVF umtholampilo "Umama Nengane" (Ryazan). Izibuyekezo abonisa ukuthi ubuchwepheshe ukuthi ochwepheshe zisebenzisa emsebenzini wabo, ngikwandise kakhulu amathuba okuthi owesifazane eqeda ukubamba.
Siye ohlwini izikhungo zokwelapha, evame ungezwakala okubuyayo. Imitholampilo futhi usebenza emizini ezilandelayo: Irkutsk, Kostroma, Odintsovo, Novokuibyshevsk, Novosibirsk, Perm, Samara, Tolyatti, Yaroslavl.
umsebenzi Quality ihlelwe sibonga ongoti abaqeqeshiwe. Eyokuqala Mark Kurtser - MD, uprofesa, umqondisi-jikelele we iqembu izinkampani "Umama Nengane". Izibuyekezo abonisa ukuthi isikhungo sakho sezokwelapha okhula ngokushesha sibonga onguchwepheshe. Awukwazi ukuthola abaxhasi ukuthengwa imishini emisha yokuthuthukisa izinqubo emkhakheni nokusetshenziswa Lokuzaliswa. Namuhla Mark Kurtser hhayi kuphela uqhuba izindaba zokuphatha, kodwa futhi ubona iziguli emtholampilo "Umama Nengane" (eMoscow). Izibuyekezo abonisa ukuthi ukwenza aphoyintimenti ukubona udokotela kuyadingeka amasonto amaningana.
Baningi Izibuyekezo ezinhle, ungezwa mayelana Arkhangelsk Svetlana Borisovna. Udokotela sesayensi yemibungu nokukhula kwayo isigaba eliphakeme wamukelekile Petersburg umtholampilo. Izibuyekezo abonisa ukuthi sibonga okwenzeka onguchwepheshe 90% kwezicelo ingafinyelela elamukelekile. Ukukhulelwa kwenzeka iziguli eziningi.
Esinye sezipho ezinhle kakhulu kuyinto reparoduktologov Danielyan Angela Vyacheslavovna. Lo chwepheshe futhi igcina reception esibhedlela Petersburg. Udokotela has zonke izindlela ukuxilongwa kanye Lokuzaliswa. Ngaphansi kobuholi Angela Vyacheslavovna lwenziwa kokukhulelwa kwesibeletho.
Izibuyekezo Good ungezwakala futhi ochwepheshe ezilandelayo: Dubinin Andrey Anatolievich, Nazarova Olga Aleksandrovna, Naumov, u-Alexei Borisovich, Nikitin Sergey Vasilievich Radionova Victoria Vadimovna, Shlykova Anna Vyacheslavovna, Solomaha Sergey Sergeevich.
Akwenzekanga ngephutha ukuthi abaningi balabo uhlela okukhulelwa ingane ukwelashwa isikhungo sezokwelapha "Umama Nengane". Izibuyekezo ukukhombisa ukuthi umtholampilo inikeza uhla egcwele namasevisi ahlobene uphethwe. Ngaphezu kwalokho, uma kunesidingo, ukuphakamisa izixazululo ezahlukene inkinga, uma owesifazane ngasizathu simbe abakwazi ukukhulelwa. Umtholampilo Ochwepheshe acabangele zonke izici ezingase zibulale owesifazane ebamba, ukukhulelwa kanye kokuzalwa kwengane yakho esizayo.
Ukuhlela ukukhulelwa emtholampilo "Umama Nengane" kuhlanganisa ucwaningo abesifazane ukugwema pathologies kungenzeka ukuthi kungathiwa enqubeni esesibelethweni. A indima enkulu futhi kudlala Ukwelulekwa zofuzo. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi kwabesifazane abangakaze kwake welashelwa ukungazali, kanye abobulili bubuhle engaphezu kwengu-35.
Ngaphambi kokuba uqale uhlela ukukhulelwa komntwana, kufanele bafune usizo nochwepheshe wezokwelapha. Lezi ochwepheshe ukusebenza inethiwekhi kwemitholampilo, "Umama Nengane". Izibuyekezo mayelana odokotela ungakwazi kuphela ukuzwa omuhle. Imikhaya eminingi lapha abaye basisebenzisa usizo, bakwazi ulinda ekuzalweni komntanakhe.
Ngo kokukhulelwa kwesibeletho (IVF)
Ngeshwa, hhayi wonke umuntu wesifazane ungathola abakhulelwe indlela yemvelo. Ukudla okungafanele, ukuphazamiseka esesibelethweni esikhathini esidlule, ngemvelo ezimbi, umsebenzi sezinzwa - konke ngenxa kungaholela nenzalo. Kuze kube manje, isicelo ubuchwepheshe, ngokuvumela ngamunye wesifazane ukuba nenjabulo yokuba umama, ngisho isimo esinzima kakhulu. Ungabuka imiphumela engcono kakhulu IVF e "Umama Nengane" (Minsk). Izibuyekezo zibonisa ukuthi abantu abaningi kuleli umtholampilo kusukela umzamo wokuqala ehluleka ukuthola sokukhulelwa oyifunayo.
Lokukhulelwa ingane ngemishini - lena kuphela kuyigxathu. Kubalulekile ukuthi umbungu babesinde futhi aqhubeka ngendlela evamile. Ngakho-ke, ukunakwa okukhulu ikhokhelwa ukuqapha abesifazane abakhulelwe ngemva IVF. Ngaphezu kwalokho, ezimweni eziningi, ukukhuleliswa ngesidoda esinikelwe yokufakelwa owesifazane enezinwele bazale abantwana eziningana. Futhi lokhu kuyinto umthwalo ezengeziwe ku izibilini umama okhulelwe.
ukunakwa Omkhulu ikhokhelwa ukuxilongwa kokubeletha. Imishini yamuva has umtholampilo "Umama Nengane" e Minsk. Izibuyekezo abonisa ukuthi sibonga imishini yesimanje kungenzeka ukwazi ubulili abantwana abangakazalwa kusukela ngesonto 12 okukhulelwa. Abesifazane asebeke babasebenzisa inkonzo IVF, ngokuvamile iphumelele ekuhlolweni nokuya obelethisayo, ababhalise. Lokhu kwenza kube lula ukubona izinguquko sokugembula emzimbeni ngendlela efanele usaqala.
Lapho umndeni isikhathi eside wangaphumelela uzama okukhulelwa ingane, avame kunenkolelo impilo ukuthi akuyena obangele leso simo zabesifazane. Kulokhu, zonke izivivinyo ijwayelekile umama okhulelwe. Ukungakwazi ayakhulelwa ingase ibe necala futhi indoda. imvelo Kubi, ukudla okungenamsoco, imikhuba emibi - konke okuyizinto kungathinta izinga isidoda. ukwelashwa ukungazali wesilisa - yezindawo core RSPC "Umama Nengane". Izibuyekezo abonisa ukuthi ezinyangeni ezimbalwa kungenzeka ukufeza umphumela oyifunayo.
Lapho indoda ime ukucela usizo? Uma njalo ukuphila ubulili kanye nokungabi khona kwanoma yiliphi sokukhulelwa zokuvimbela inzalo ingekho, kuhle ukucabangela kwaze kwaphela unyaka. Uma owesifazane phezu 35, udinga ukucela usizo lapho nje ebamba isisu ingekho i-6 ezedlule. Reproductology umtholampilo "Umama Nengane" isehlane ezimbili izinhlobo ukungazali wesilisa - zamabanga aphansi naphezulu. Ochwepheshe bathi Indlela yesibili amenable ngaphezulu ekwelashweni. Kunoma ikuphi, zokugula ngokushesha sitholakale, ngcono amathuba okukhulelwa ingane ephile saka.
Uma umbhangqwana isikhathi eside angeke okukhulelwa ingane, indoda ngeke sidlule kokuxilongwa. Futhi uzodinga luhlolo andrologist. Indoda kufanele kudlule sperm igazi ngoba i-hormone sokuhlola. Ngaphezu kwalokho, kungase kwenziwe ultrasound zokuxilonga we scrotum futhi wendlala.
ukuphathwa Steel ukungabi nenzalo
Ububanzi ngokugcwele amasevisi for ekwelapheni ukungabi nenzalo umtholampilo inikeza "Umama Nengane" (Ufa). Izibuyekezo abonisa ukuthi imiphumela emihle ingatholakala ngokusebenzisa ukuhlinzwa. Izinhlobo eziningi zezinkolelo ukungazali e kokubili amadoda nabesifazane, ngeke welaphe elinento eyodwa isicelo imithi elihambisana. Lokubaluleke kakhulu kuyinto le laparoscopy zokuxilonga. Ngezinye izikhathi ukuhlonza imbangela ukungazali ngaphandle kokuhlinzwa engenakwenzeka. Kulokhu, onguchwepheshe yakhetha ukusetshenziswa idivayisi ekhethekile - laparoscope. Ngokusebenzisa imbobo encane ibe ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu ekamelweni oyifakile. Ngenxa ukwanda aphindaphindwe qapha Uchwepheshe uhlola ngokuningiliziwe izitho okhalo.
ukuhlolisisa eningiliziwe odongeni kwesibeletho Kungafezani ne hysteroscope. Ngaphezu kwalokho, nedivaysi enjalo ingenziwa impatho yabesifazane ukungazali (cut septum, ukususwa polyp). Izibalo zibonisa ukuthi u-40% abesifazane futhi ngemuva kwezinyanga eziyisithupha ukukhulelwa eside elindelwe kwenzeka ngemva kokuhlinzwa.
Ngenxa ukuqanda isitoreji efanele kwamaseli womuntu kulondolozwe yonke imisebenzi yemvelo ngemibhangqwana eminingi abakwazi okukhulelwa ingane. Lokho kwenza kube nokwenzeka cryopreservation e inethiwekhi kwemitholampilo, "Umama Nengane" IVF. Izibuyekezo ochwepheshe ukunikeza ithuba ukuqonda ukuthi ungagcina kokubili amangqamuzana omuntu futhi imibungu ngesethi ngezakhi zofuzo. Ngosizo lwezobuchwepheshe lo mbhangqwana ungakwenza ukuhlela hhayi kuphela ubulili umntwana, kodwa futhi idatha yangaphandle yayo. Kungenzeka ukuba akhulelwe izingane eziningi.
Inethiwekhi ye imitholampilo yezempilo, "Umama Nengane" lisetshenziswa indlela ephephile kakhulu okokuqandisa - vitrification. amaseli Female ukuphatha ukuze uthole ngokusebenzisa ukushukuma nge-ovulation kanye ukusetshenziswa kwezidakamizwa ekhethekile. Amathuba sokukhulelwa usebenzisa amaseli eqandisiwe ngesikhathi IVF impela high. izinga kwesidoda ngoba okokuqandisa kungukuthi encishisiwe. Cryopreservation lamaseli besilisa liboniswa uma kwenzeka ukuthi isiguli kwakudingeka abhekane nesimiso isifo eziyinkimbinkimbi okudinga ukwelashwa eside. Ngokuvamile emva kokungenela yezokwelapha izinga isidoda is kakhulu ziyancipha.
Umtholampilo "Umama Nengane"
inethiwekhi Umsebenzi ezikhungweni zezempilo ngokuyinhloko okuhloswe ngaso okwandisa izinga lokuzalwa. Ukuba azale ingane enempilo kungenzeka kuphela isimo kahle abazali. Ngakho-ke, "Umama Nengane" imitholampilo ngamasevisi zabo odokotela babo bonke amakhono. Kungaba kwenziwe ukuxilongwa kanye nokwelashwa cishe yonke kwezitho izinhlelo. Ukusungulwa yezokwelapha onemali ucwaningo kanye nokwelashwa kwe-pathology ecashile. Kwezinye izibhedlela kukhona izibhedlela. Iziguli zingenza kwenziwe ngaphansi kokuqondisa kwabasebenzi abaqeqeshiwe.
Cishe wonke amasevisi enethiwekhi esibhedlela uphiwa ochwepheshe ezilandelayo: wemithi yangaphakathi, udokotela wezifo zabesifazane, Urologist, andrologist, mammolog, a endocrinology zokuzala.
Ukuze isiguli ngasinye, kudala Uhlelo ayo ukuxilongwa kanye nokwelashwa kwezinso itholiwe. Izindleko zokwelashwa kuzoncika inani izinqubo ezidingekayo.
Izibuyekezo ze-network, "Umama Nengane" imitholampilo
Uma sikholwa amazwi nesineke, abaningi bakwazi ukuthola ukhulelwe ngenxa ukunakwa yezokwelapha isikhungo ochwepheshe. Ekhuthazwe yokuthi emtholampilo inikeza uhla egcwele zokwelashwa ezihlobene ukuhlela yokukhulelwa. Imindeni uhlela ukuzalwa komntwana kungaba ahlolwe ngokugcwele ngaphambi nje ebamba isisu.
Kuningi wokubuyekezwa okuvumelekile, ungase futhi ukuzwa IVF. Inqubo ku "Umama Nengane" imitholampilo wenziwa izinga okusezingeni eliphezulu ngempela. Lokhu kungaba liyokwahlulelwa isibalo sabesifazane abakhulelwe kabani lokuzalwa kwaba eyayenziwe. Ezimweni eziningi kungenzeka okukhulelwa umzamo wokuqala. Kungaba wagomela ukuthi inethiwekhi "Umama Nengane" unikeza omningi amadoda nabesifazane manje nokuphila komkhaya okujabulisayo!
Ukubambisana kwezwe jikelele komnotho - izinzuzo nezinsongo
Indlela yokubopha inothi "isanqante" ngendlela efanele. Izinzuzo zayo eziyinhloko nokungalungi